Nyefee site na OSF - AfricArXiv
The Center maka Open Science na-akwado AfrikaArxiv site na ihe nkesa Open Science Framework Preprints Iri OSF.
PLease soro ntuziaka na anyị 'Tupu ikwenye'Peeji. N'ọnọdụ ajụjụ ọ bụla zitere anyị ozi-e nyefee @africarxiv.org.
Ọzọkwa ị nwere ike ịchọrọ ịgụ help.osf.io/…/Olee otú-esi-Kwadebe -Your-Preprint
Ozugbo ihe odide gị dị njikere maka inyefee gaa na OSF nyefee OSF.
Dị ka nke mbụ oge Onye ọrụ OSF, ike akaụntụ OSF ma ọ bụ jiri nke gị banye ORCID njirimara.
Iji bulite ihe odide, pịa sere ma dobe faịlụ ahụ na desktọpụ gị, wee pịa chekwaa ka ịmalite ibido.
Họrọ usoro ọzụzụ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị na-ekerịta ụdị edemede nke ebipụtala mbụ, biko tinye isiokwu ahụ DOI ka ị jikọta ha. Nwere ike itinye isi okwu ọ bụla, ụbọchị mbipụta, na nke adịghị adị.
Iji tinye ndi na-edekọ akwụkwọ, biko lelee ma ị debanyere aha ndị ọrụ OSF; ma ọ bụghị, tinye ha site na email.
Pgbaa mbọ hụ na ndị ode akwụkwọ niile maara, ma kwekọrịta, ido onwe ha. A ga-agwa gị ka ha nyefee akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ahụ.
Nyefee akwụkwọ gị. Ihe nkwenye ga-enweta oge maka nlele nke ogo yana nnabata ya na ndepụta nyocha anyị bipụtara ma ebipụta ya n'ịntanetị n'ime ụbọchị 3 ruo ise.
Iji dezie otu n'ime akwụkwọ ịchọrọ ịnabata, ị nwere ike imelite ntinye DOI site na ụdị nke ihe odide ederede dị ọhụrụ site na akaụntụ OSF gị. Chọta ozi ndị ọzọ gbasara otu esi eme nke ahụ na enyemaka.osf.io/hc/en-us/articles/360019930573-Edit-Your-Preprint
Nye aka na AfricaArXiv na OSF
Nwere ike isonyere anyị na ịkwụ ụgwọ ụgwọ maka ịkwalite nkwado ụlọ AfrikaArXiv na Open Science Framework (OSF). Maka nkọwa biko gaa opencollective.com/africarxiv/contribute/africarxiv-on-osf-2020-25060
More ọdịnaya ndị Africa na OSF
OSF maka itlọ Ọrụ
Mụta ihe banyere Reakiti nke dijitalụ Afrịka nke Africa: Nkewa esereseafricarxiv.org/african-digital-research-repositories
- na [Data set] dị na doi.org/10.5281/zenodo.3732172
AfricArXiv na OSF - ngosi
Ederede blog metụtara
Ebumnuche emezuru: OSF nhazi mbido & mmezi 2020
Ego ọrụ maka OSF preprint hosting na mmezi - AfricArXiv na-aga n'ihu ọrụ ya
14th nke February 2020
[Weebụ] Ewebata AfricaArXiv
Oct 2018 - Webinar a na-ewebata AfricArXiv, ọrụ ntinye aka ọhụrụ maka ndị ọkà mmụta sayensị Africa. Ndị sonyere na-ahụ etu ha ga-esi tinye nyocha nke aka ha maka itinye na mkpokọta AfrikaArXiv yana ụfọdụ uru dị na ime nke a nwere ike iweta usoro nke ịkọkọrịta ihe ọmụma na ohere ka ukwuu iji wulite njikọta na na mpụga Africa.
Chọgharịa site na AfricArXiv na OSF